BitBoss စျေး - အွန်လိုင်း BOSS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitBoss (BOSS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitBoss (BOSS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitBoss ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitBoss တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitBoss များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitBossBOSS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0349BitBossBOSS သို့ ယူရိုEUR€0.0297BitBossBOSS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0267BitBossBOSS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0321BitBossBOSS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.315BitBossBOSS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.221BitBossBOSS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.778BitBossBOSS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.131BitBossBOSS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0465BitBossBOSS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.049BitBossBOSS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.783BitBossBOSS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.27BitBossBOSS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.188BitBossBOSS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.61BitBossBOSS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.9BitBossBOSS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0479BitBossBOSS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0533BitBossBOSS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.09BitBossBOSS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.242BitBossBOSS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.72BitBossBOSS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩41.37BitBossBOSS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.54BitBossBOSS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.56BitBossBOSS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.966
BitBossBOSS သို့ BitcoinBTC0.000003 BitBossBOSS သို့ EthereumETH0.00009 BitBossBOSS သို့ LitecoinLTC0.000655 BitBossBOSS သို့ DigitalCashDASH0.000407 BitBossBOSS သို့ MoneroXMR0.00041 BitBossBOSS သို့ NxtNXT2.88 BitBossBOSS သို့ Ethereum ClassicETC0.00525 BitBossBOSS သို့ DogecoinDOGE10.34 BitBossBOSS သို့ ZCashZEC0.000443 BitBossBOSS သို့ BitsharesBTS1.37 BitBossBOSS သို့ DigiByteDGB1.19 BitBossBOSS သို့ RippleXRP0.126 BitBossBOSS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00123 BitBossBOSS သို့ PeerCoinPPC0.118 BitBossBOSS သို့ CraigsCoinCRAIG16.22 BitBossBOSS သို့ BitstakeXBS1.52 BitBossBOSS သို့ PayCoinXPY0.622 BitBossBOSS သို့ ProsperCoinPRC4.47 BitBossBOSS သို့ YbCoinYBC0.00002 BitBossBOSS သို့ DarkKushDANK11.42 BitBossBOSS သို့ GiveCoinGIVE77.07 BitBossBOSS သို့ KoboCoinKOBO8.11 BitBossBOSS သို့ DarkTokenDT0.0321 BitBossBOSS သို့ CETUS CoinCETI102.76